हुम्लामा १२ जनालाई कोरोना पुष्टी, भाइरस समुदायस्तरमै फैलिएको आशङ्का « Rara Pati
हुम्लामा १२ जनालाई कोरोना पुष्टी, भाइरस समुदायस्तरमै फैलिएको आशङ्का
२९ कार्तिक, हुम्ला । ग्रीनजोनको रूपमा चिनिएको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको केन्द्र याल्वाङ्गको विद्यालयमा दुई दिनको अन्तरमा १२ जनालाई कोरोना पाजेटिभ देखिएको छ । कोरोना सङ्क्रमण देखिएसँगै विद्यालयलाई शिल गरिएको छ भने गाउँपालिकाको सबै नाका बन्द गरिएको छ ।
विद्यालयको छात्रबासका विद्यार्थी र सञ्चालकलार्ई सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो आउँपछि कोरोना परिक्षण गराउदा पहिलो पटक चार जनालाई कोरोनो पोजेटिभ देखिएको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाले बताए ।
सङक्रमण देखिएपछि तत्काल जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापन समितिको बैठकले विद्यालय कात्तिक २८ देखि ३० गतेसम्म शिल गरेको थियो । कोरोना पोजेटिभ देखिएकाहरूसँग सम्पर्कमा आएकाहरूको पनि स्वाव सङ्कलन गरी सुर्खेत पठाउँदा थप ८ जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाले जानकारी दिएको छ ।
नाम्खाको केन्द्र याल्वाङ्गमा रहेको विद्यालयमा दुई दिनको फरकमा चार र आठ गरी १२ जनालाई कोरोनो पोजेटिभ देखिएको जिल्लाको पहिलो घटना हो । यसबाट हिउँदको समयमा सञ्चालनमा आएका विद्यालयहरूमा सन्त्रास फैलिएको छ । अविभावक, शिक्षक र विद्यार्थीहरू सचेत हुँदाहुँदै पनि कोराना प्रकोपको भागीदार हुनुपर्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ ।
दुई दिनमै १२ जनालाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि भाइरस समुदायस्तरमै फैलिसकको आशङ्का गरिएको छ ।
पंचदेवल विनायक नगरपालिका वडा नं. ६ को तोली गाउँमा आयुर्वेदिक शिविर सम्पन्न
सुर्खेत । अछामको पंचदेवल विनायक नगरपालिका–६ तोलीमा नगरपालिकाको आयुर्वेद शाखाले शिविर सञ्चालन गरेको छ ।
माछा खाँदा पाइने ६ स्वास्थ्य लाभहरू
काठमाडौं । भिटामिन, मिनिरल र पोषणको भरपुर भण्डार हो, माछा । यसमा प्रोटीन, ओमेगा–३, फ्याटी
एजेन्सी । ५०० मध्ये एक जना पुरुषमा पहिला अनुमान गरेजस्तै एउटा अतिरिक्त सेक्स क्रोमोजोम हुन
काफल खानुका फाइदा
१. सिजनमा नियमित ५०–१०० ग्राम पाकेको काफल खानाले मुख तथा जिब्रोमा आउने घाउ खटिरा निको
मुगुमा पुग्दैन औषधि, झारफुकको भरमा बिरामी
मुगु । मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका२ को मुगु स्वास्थ्य चौकीमा औषधि समयमै नपुग्दा बिरामीलाई सास्ती